Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: hilalao voalohany miaraka amin’ny PSG i Ramos anio | NewsMada
Kitra – «Ligue des champions d’Europe»: hilalao voalohany miaraka amin’ny PSG i Ramos anio
Hitohy anio alarobia, manerana an’i Eoropa ny andro fahadimy amin’ny fifanintsanana isam-bondrona hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra “Ligue des champions”. Anisan’ny lalao goavana andrasan’ny rehetra ny ao amin’ny vondrona “A”, hifandonan’i Manchester City sy ny PSG. Lalao hotanterahina ao Etihad Stadium.
Hilalao voalohany miaraka amin’ny Paris St Germain i Sergio Ramos. Izay mantsy izy vao hiakatra kianja, taorian’ny nifindrany tao amin’ity ekipa parizianina ity. Noho ny ratra nahazo azy ny antony. Nantsoin’i Mauricio Pochettino, mpanazatra ny tovolahy hanatevina ny fiarovantenan’ny PSG, amin’ity.
Mikasa ny haka ny toerana voalohany ao amin’ity sokajy ity mantsy ity mpanazatra arzantin ity. Araka izany, efa miverina ao anaty ekipa ihany koa ilay Italianina, mpiandry tsatoby, i Gianluigi Donnarumma, taorian’ny tsy fahasalamany. Ankoatra izay, mpilalao roa tena andrin’ity ekipa frantsay ity ihany koa no tsy mbola afaka hiakatra kianja, eo ilay Brezilianina, i Rafinha sy ilay Alemà, i Draxler. Mbola manalasala kosa ny amin’i Juan Bernat sy i Layvin Kurzawa.